Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Saint Lucia » Cusbooneysiinta Saint Lucia ee Hurricane Elsa
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • jiga • Ammaanka • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Jimcihii, Julaay 2, Nooca 1 Hurricane Elsa waxay dhaaftay jasiiradda Saint Lucia. Qiimeyn lagu xaqiijinayo heerka saameynta jasiiradda oo dhan ayaa dhacday tan iyo markii duufaantu dhaaftay.
Duufaanta ayaan waxyeello weyn u geysan kaabayaasha dalxiiska.
Amarka oo dhan oo cad waxaa soo saaray 9:45 pm fiidnimo July 2 waxaana soo saaray Ururka Maareynta Degdegga ah ee Qaranka (NEMO).
Dalxiiskii iyo howlihii garoonka ayaa saakay si buuxda dib u bilaabay.
Hay'adda Saint Lucia Air and Sea Ports Authority (SLASPA) ayaa ku warameysa in garoonka caalamiga ah ee Hewanorra (UVF) iyo George FL Charles Airport (SLU) ay dib u bilaabeen howlahoodii caadiga ahaa 10-kii subaxnimo ee saakay si ay u yimaadaan ugana baxaan duulimaadyada. Socotada waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka hubiyaan shirkadaha duulimaadyadooda wixii ku soo kordha. Dadaal lagu doonayo in lagu hagaajiyo waqtiyada ka shaqeynta, rakaabka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay goor hore hubiyaan.
Ururka Isbitaalada & Dalxiiska ee Saint Lucia (SLHTA) ayaa ku soo warramey in hudheellada iyo dalxiisyadu ay si wanaagsan u fayoobeen iyada oo aan waxyeello hantiyeed soo gaadhin. Nadaafad qurxin ayaa ka socota xarumaha la xiriira dalxiiska. Martida hudheelka waxaa daryeelay kooxaha goobta jooga waxayna ku nabad qabaan goobahooda nasashada.
Xaaladaha dabaysha iyo roobabku waxay waxyeello u geysteen Saint Lucia dhammaantiisna korontada ayaa dib loogu soo celinayaa meelihii googo'yadu ka dheceen. Shabakadda waddooyinka waxaa loo aqoonsaday mid ammaan u ah marinka Wasaaradda Kaabayaasha. Ma jiraan wax warbixino ah oo hakad geliyay biyaha.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa si ku meel gaar ah u aqbali doonta diidmada Covid-19 Natiijooyinka baaritaanka PCR ee ka weyn 5 maalmood rakaabka imanaya Saint Lucia illaa Axadda, Luulyo 4, 2021, kaliya. Ka dhaafida kumeelgaarka ah ayaa ah in la fududeeyo socotada ay saameysay duufaanta Elsa. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan hab maamuuska Covid-19 iyo gelitaanka Saint Lucia, fadlan booqo www.stlucia.org/covid-19.
Si loogu qalmo in si buuxda loo tallaalo, socotadu waa inay lahaadaan qiyaasta ugu dambaysa ee laba-tallaal ah COVID-19 ama tallaal hal-qaadasho ah ugu yaraan laba toddobaad (14 maalmood) safarka ka hor. Socotadu waxay tilmaami doonaan inay si buuxda u talaalanyihiin markay buuxinayaan foomka Ogolaanshaha Safarka kahor imaanshaha, ayna soo dhigayaan cadeynta talaalka. Soo-booqdeyaashu waa inay ku safraan kaarkooda tallaalka ama dukumintiyada. Markay yimaadaan Saint Lucia, booqdayaasha horay loo diiwaangeliyey ee si buuxda u tallaalay waxaa lagu dadajinayaa khad gaar ah oo loogu talo galay in lagu baaro Caafimaadka waxaana la siin doonaa xarig curyaannimo oo aan elektaroonig ahayn inta ay joogaan. Xarkahan curcurka waa in la xidho inta uu joogo oo laga saaro marka uu baxayo Saint Lucia.
Safrayaasha aan tallaalneyn ayaa loo sii wadi doonaa in loo ogolaado in ay joogaan ilaa laba guri oo la aqoonsan yahay 14ka maalmood ee ugu horeeya muwaadiniinta soo noqda ee aan la talaalin ayaa looga baahan doonaa in ay codsadaan karantiil isla muddadaas.
$ 90 bilyan oo raqiis ah: Subway wuxuu ku jees jeesaa Faransiiska ...
Dhulgariir Xoog leh oo ruxay Filibiin
Kooxda hoggaanka cusub ee ay ku dhawaaqday Aprecia
ProCare Health oo ay heshay Clinigence Holdings